बीमाले नेपालीहरुको जीवनस्तर धेरै माथि उठाउँछ | My News Nepal
२०७७ असार २१ गते
बीमाले नेपालीहरुको जीवनस्तर धेरै माथि उठाउँछ
२०७४ पुस ३ गते
बजारमा १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएसँगै कम्पनी व्यवस्थापनमा सञ्चालकलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । नेपालमा बीमाको इतिहास लामो भए पनि बीमाको दायरालाई बीमा कम्पनीहरुले नै फराकिलो नपार्दा त्यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पनि उत्पादन भएनन् । भर्खरै खुलेका बीमा कम्पनीले लामो अनुभव लिएको कर्मचारी अन्य कम्पनीबाट ल्याउन सक्नु त्यो कम्पनीका लागि ठूलो सफलता हात परेको ठान्नुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिले लामो समयपछि १० वटा नयाँ जीवन बीमालाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यसैक्रममा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स यसमध्येको एउटा नयाँ बीमा कम्पनी हो । जसले निर्जीवन र जीवन बीमा क्षेत्र दुवै बुझेको अनुभवी व्यक्ति मनोजकुमार लाल कर्णलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पाएको छ । उनै कर्णसँग इन्द्र बानिया र विजयराज फुयाँलले बीमा कम्पनीहरुको अवसर र चुनौतीका बारेमा गरेको कुराकानी : मनोजकुमार लाल कर्ण, सीईओ – युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
० नयाँ बीमा कम्पनीको सीईओ भएर आउनु भएको छ, बजार कसरी निर्माण गर्नु हुन्छ ? – नेपाल बीमाको व्यापारको लागि ‘भर्जिन’ बजार हो । यहाँ जम्मा २ देखि ३ प्रतिशतमात्रै जनताले पूर्ण रुपमा बीमा गरेका छन् । नेपलमा आवश्यक भए जति बीमा नै भएको छैन । नेपालमा बीमाको बारेमा जनचेतना मात्रै वृद्धि गरिदिने हो भने बीमा क्षेत्रमा नसोचेको लगानी आउँछ । त्यसले आम नेपालीहरुको जीवनस्तर पनि धेरै माथि उठाउँछ ।
० चेतनाको कमीले मात्रै ९७–९८ प्रतिशत मानिस बीमा गर्न नआएका हुन् त ? – त्यो मात्र पनि होइन, पहिलो कारण चेतनाको अभाव पनि हो । नेपालमा बजार नभएको भए बहुराष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपालमा किन आउथे ? नेपालमा बजार छ वा छैन भन्ने विचारमा पनि दुई भागमा विभाजन भएका छन् । कोही भन्छन् –‘बजार छ, काम गरौं ।’ कोही भन्छन्–‘नेपालमा गरिबी छ बीमा गराउने पैसा नै छैन ।’ अब मैले बुझेको के हो भने जति अविकसित र गरिब देश छ, बीमाको बजार त्यहाँ धेरै हुन्छ ।
० लामो समयदेखि काम गरिहेका कम्पनीहरुले बजार विस्तार गर्न सकेका छैनन्, अनि रातारात तपाईंहरुले चाहीँ कसरी बजार विस्तार गर्नु हुन्छ ? – नेपालमा बीमाको ८ प्रतिशको आँकडा भनिँदै आएको छ । नेपालमा गरिनु पर्ने जति बीमा नै भएको छैन । बीमा गरेकाको पनि आवश्यकता जति बीमा गरका छैन । बीमाको अवधारणा नै के हो भने कुनै परिवारले बीमा गरेको छ भने उसको परिवारको कुनै करणले मृत्यु भएमा आर्थिक रुपमा सुरक्षित् पार्नु बीमा कम्पनीको दायित्व भित्र पर्छ ।
० बीमालाई देशव्यापी बनाउन के गर्नुपर्ला ? – अहिले नेपालमा बीमाको क्षेत्रमा केही सजिलो पनि भएको छ । हिजो जीवन बीमा कम्पनीहरु थोरै थिए । उनीहरुलाई धेरै टाढा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर, अब कम्पनी धेरै भएका छन् धेरै भएको फाइदा भनेको सबै क्षेत्रमा बीमाको उपस्थिति हो । सबै स्थानमा उपस्थिति देखिएपछि बीमाको बारेमा आममानिसले कुरा गर्न थाल्छन् । बीमा कम्पनीहरु धेरै भएपछि देशका नयाँ स्थानमा शाखा विस्तार हुन्छन । एबम प्रकारले देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ शाखाको उपस्थिले बीमाको बारेमा चेतना बृदिका साथै बीमाको व्यापार विस्तार गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने छैन ।
० यही बजारमा नयाँ पुराना कम्पनीको व्यापार के हुन्छ ? – हिजो ९ वटा थिए अहिले १८ वटा भएपछि अगाडि बढ्न अझ् बल पुग्छ । नयाँ आउँदैमा पुरानोको व्यापार घट्दैन । निर्जीवन बीमातर्फ एकले अर्काको व्यापार तानातान होला । तर, जीवन बीमामा त्यस्तो हुँदैन ।
० अब कम्पनीहरुले गाउँ–गाउँमा बीमा विस्तार गर्नुपर्ने भएपछि अहिले बेचिरहेको बीमा पोलिसी नै बिक्छन् त ? – बजारमा यस्ता धेरै हल्ला मैले पनि सुनेको छु, अब नयाँ पोलिसी नल्याएमा बीमा व्यापार चल्दैन । अब नेपालमा बीमा नै गरेको छैन भने नयाँ न पुरानो सबै नयाँ हुने भयो । जहाँ शतप्रतिशत बीमा भइसकेको भए पो नयाँ र पुरानो पोलिसीको कुरा हुन्थ्यो । अहिले नयाँ पुराना बीमा कम्पनीका प्रमुखहरु कार्यालयमा बसिरहेका छैनन् । उनीहरु रातदिन बजारमा नै घुमिरहेका छन् ।
० अब बीमा आममानिसमा पुग्ने समय कति जति लाग्ला ? – अबको पाँच वर्षमा बीमा क्षेत्रले धेरै लामो फड्को मार्ने विश्वास मैले लिएको छु । देशमा स्थायी सरकारमात्रै निर्माण भयो भने बीमा क्षेत्रमात्र होइन अन्य क्षेत्र पनि अगाडि बढ्ने छन् ।
० त्यसो भए पाँच वर्षसम्ममा बीमामा नेपालीहरुको पहुँचको प्रतिशत कति पुग्ला ? – विस्तार अब पहिलोको जस्तो गरेर हुनेवाला छैन । यस वर्ष कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत वृद्धि हुने देखेको छु । पहिला म कुनै कम्पनीमा काम गर्दा ४ करोड प्रिमियम आउथ्यो, त्यसपछि बढ्दै ९,१३,१८ अनि ३६ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो । अबका नयाँ कम्पनीहरुको प्रिमियम एकैपटक तिनीहरुले ५ बर्ष गरको १ बर्ष गर्छन ।
० बीमाको व्यापार बढाउने भनेको बीमा अभिकर्ताहरुले नै हो । तर, बीमा अभिकर्तालाई हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ, यसलाई कसरी सम्मानजनक बनाउनु हुन्छ ? – अभिकर्ता पेशा समाजसेवा हो । यस पेशालाई समाजले खराब दृष्टिकोणले हेर्नु भनेको समाज सेवालाई नै तिरस्कार गर्नु हो । बीमा अभिकर्ता जस्तो पून्यको काम गर्ने अन्य पेशा नै छैन । बीमा अभिकर्ता भनेको लाखौंलाई जीवनदान दिने पेशा हो । लाखौं मानिसको खल्तीमा भएको पैसालाई लगानी गर्न प्रेरित गर्छ । अर्बौ क्षति हुने व्यवसायलाई जीवन दिने काम बीमा अभिकर्ताले गरेका छन् ।
० बीमा क्षेत्रमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ? – बीमा समितिको निर्देशिकामा नै बीमा कम्पनी खोल्दा नै केही महत्वपूर्ण पद (अनडर राइटर, रिइन्स्योरेन्सर, दावी, प्रमुख कार्यकारी) मा व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । अर्को हामीले नयाँ कर्मचारी ल्याएर तालिम दिएर अनुभवी बनाएर काममा कम लगाइ रहेका छौं । अहिले पनि ८–१० जनालाई तालिम दिइरहेका छौं ।
० नेपालबाट अझै ठूलो मात्रामा बीमा (प्रिमियम) विदेशमा गइरहेको छ यसले यो बजारलाई असर गरेको छैन ? – अब यसलाई हामी सबै मिलेर रोक्नपर्छ । कसले कहाँ कुन देशमा कसरी बीमा गरिहेको छ, त्यो सरकारले र हामी बीमा कम्पनी मिलेर रोक्नु पर्छ ।
० अब बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्छन्, यस्तो हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? – जीवन बीमा व्यवसाय आफ्नोे दायरामा बसेर गर्नुपर्छ । बीमा दर घटाएर वा बढाएर बीमा गर्न पाइदैन, बीमा समितिले पनि विभिन्न बीमा लेखहरुमा सिमा तोकिदिएको छ । बीमा अभिकर्ताले पौने लिने दर बीमा ऐन २०४९ अनुसार निर्धारण गरिएको हुन्छ । ऐन नियिम अनुसार हुने हुनाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना म चाहिँ देख्दिन ।
मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
२०७६ चैत्र २० गते
‘म गायनमै खुसी छु’
२०७६ मंसिर २६ गते
दशैंका लागि नयाँ नोटको सटही आजबाट (सूची सहित)
२०७६ असोज १० गते
भोलीबाट ५० रूपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंक
हेड्स नेपाल मकाउ शाखाको प्रथम अधिबेशन सम्पन्न
नेपालीमा कोरोनाः विश्वभर १ सय ७७ नेपालीले ज्यान गुमाए, ४४ हजार ६६६ नेपाली संक्रमित
काठमाडौंका थप २७ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँ कहाँ पुष्टी भयो त संक्रमितको नमुना ?
नेपालमा थप २९३ मा कोरोना संंक्रमण पुष्टी